ကော့စတာရီရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ကော့စတာရီရှိ SA
ကော့စတာရီကာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကော့စတာရီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်မှု။
ပြုလုပ်သူသန်းချီသောကော့စတာရီကာသည်ကော့စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
ကော့စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
ကော်စတာရီကာအတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ ကော့စတာရီကာအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ကော့စတာရီကာအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ကော့စတာရီကာအတွက် CRM Solutions၊ ကော်စတာရီကာအတွက် CRM Solutions နှင့်ကော်စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများအပြည့်အစုံကိုပေးသည်။ ကော့စတာရီနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ယနေ့သင်၏ကော်စတာရီကာ SRL နာမည်ကိုရယူပါ။
သင်၏ကော့စတာရီကာ SRL နာမည်ကိုရှာပါ
Corporation - SRL သို့မဟုတ် SA, SRL, သို့မဟုတ် SA သည်အနည်းဆုံးလူတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်ပိုသောကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရင်းအနှီး (အမည်ခံအရင်းအနှီး) ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများမှဖွဲ့စည်းထားသောတရားဝင်ဥပဓိရုပ်နှင့်ပြည့်စုံသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်စ်အေနှင့် SRL နှစ်ခုလုံးကိုလီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီများ (LLC-s) ဟုသတ်မှတ်သည်။
ကော့စတာရီကာတွင်အထူးသဖြင့် SRL / SA တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်မှုရှိသောတိုင်းပြည်ကိုရှာဖွေနေကြသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု စတင်သည့်အတွက်လုံခြုံရေး၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ရွက်လှေများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် ICO blockchain နှင့်အခြား cryptocurrency-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများcryptocurrency ပွဲစားများနှင့်အကျိုးဆောင်များ၊ crypto ငွေကြေးအခြေခံသောလောင်းကစားခြင်းနှင့် blockchain နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် ခွင့်မပြု အောက်ပါလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရန် -
မှတ်စု * အခွန် - နေထိုင်သူများနှင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများသည်ပြည်တွင်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေအပေါ်တွင်အခွန်ကောက်ခံသည်။
ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - ကော့စတာရီကာ၊ ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုစတင်ရန်နှင့်ကော့စတာရီကာတွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ရုံးခန်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်များကိုစတာရီကာ၊ ကော့စတာရီကာတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ကော့စတာရီကာမှတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကော့စတာရီကာတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကော့စတာရီကာတွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Rica သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်ကော့စတာရီကာ၊ လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေး၊ လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ ကော့စတာရီကာရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကော့စတာရီကာရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကော့စတာရီကာရှိကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အမည်ကိုဖော်ပြရန်ကော့စတာရီကာတီထွင်မှု၊ ကော့စတာရီကာဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။
ကော့စတာရီကာတွင်တည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် - ကော့စတာရီကာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှအဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုကော့စတာရီမှကမ်းလွန်ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များပါ ၀ င်သည်။ ကော့စတာရီကာတွင်အရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ ကော့စတာရီကာရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကိန်းဂဏန်းနံပါတ်များ၊ ကော့စတာရီကာတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာမှတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကော့စတာရီကာရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ , ကော့စတာရီရှိ CRM Solutions၊ ကော့စတာရီကာရှိကုန်သည်အကောင့်နှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ကော့စတာရီကာရှိပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်ကော့စတာရီကာတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ကော့စတာရီတွင်စေ့စပ်သေချာစွာလိုက်နာခြင်း၊ ကော့စတာရီတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကော့စတာရီကာရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကော့စတာရီကာတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ကော့စတာရီကာနှင့်ဘီဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှု အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှကော့စတာရီအတွက်သော့ခတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ကော့စတာရီရှိ SRL အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
ကော့စတာရီကာအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ကော့စတာရီကာအတွက်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာကော့စတာရီနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ကော်စတာရီကာတွင်အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ WE ကော့စတာရီကာအတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်း။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီကာ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီကာ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီကာ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီကာ
Merchant Account Costa Rica / Payment Gateway ကော့စတာရီကာ
ကော့စတာရီကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း Costa Rica
ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal ကော့စတာရီကာ
ကော့စတာရီတွင် SRL အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● SRL ကော့စတာရီ (၁ နှစ်) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်ခ - ဒေါ်လာ ၂၅၀၀
●ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၆၄၁၀
●နာမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●ကော်စတာရီကာတွင် SRL အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●ကော်စတာရီကာရှိ SRL အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
●ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့် SRL အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ခြင်း
●ကော့စတာရီကာရှိ SRL အတွက်ကုမ္မဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ခန့်ထားရန်
●ကော့စတာရီကာရှိသင့်အတွက် SRL အတွက်သင့်အတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းတွင်အသင်းဝင်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဆုံးဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကော့စတာရီကာတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်ကော့စတာရီကာ (သို့) နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကော့စတာရီကာမှ SRL အတွက်အမည်ခံဒါရိုက်တာ
SRL ကော့စတာရီအတွက်ရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
SRL အတွက် Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
SRL အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီကာမှသန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများမှတဆင့်
အကယ်၍ သင်သည်ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကော့စတာရီကာကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်မည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးမည်။ ကော်စတာရီကာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ကော့စတာရီရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကော်စတာရီကာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်ကော့စတာရီကာတွင်ရှိသောဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်ကော့စတာရီကာရှိကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတဆင့်ကော့စတာရီတွင်ဖွဲ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်ကော့စတာရီကာတွင်ပါဝင်သည်၊ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်ကော့စတာရီကာအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကော့စတာရီအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ဖူးသောအကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်ထားချင်တယ် ကော့စတာရီကာနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကော့စတာရီကာရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ကော့စတာရီကာ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ကော့စတာရီကာ.
ကော်စတာရီကာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အတူကော့စတာရီကာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်ကော့စတာရီကာတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြေကိုသင်ပေးသည်။ ကော့စတာရီရှိဝန်ဆောင်မှုများ။
ကော့စတာရီတွင် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ - ကော့စတာရီတွင် SA မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုကော့စတာရီအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစပြုခြင်းကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောလျှင်မှန်ကန်လိမ့်မည်။ အတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်စတာရီကာရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE ကော့စတာရီကာအတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်း။
ကော့စတာရီရှိကော့စ်ရီကာ / အေဒီမှ SRL အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွင်
ကော်စတာရီကာရှိရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ကော့စတာရီကာရှိကော်စတာရီ / အက်ဒီအေရှိ SRL အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
ကော့စတာရီကာရှိ SA အတွက်ကတ်စ်ရီကာ / အက်စ်အေမှ SRL အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ။
ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကော့စ်တာရီကာ / အက်စ်အေတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော SRL အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ကော့စတာရီကာရှိ Costa Rica / SA တွင် SRL မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကကော့စတာရီရှိကော့စတာရီ / SA တွင် SRL ။
ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော့စတာရီကာ / အက်ဖ်အေမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် SRL မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ကော့စတာရီရှိ SRL / ကော့စတာရီရှိ SA -
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည်ကော့စတာရီကာတွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်ကော့စတာရီကာမှခွင့်ပြုချက်မရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများမှကူစတာရီကာရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုင်စင်မရသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ ကော့စတာရီကာတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ကော့စတာရီကာရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများနှင့်ကော့စတာရီကာရှိအခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ ကော့စတာရီကာတွင်ကော့စတာရီကာရှိငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကော့စတာရီကာရှိလုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Costa Rica ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ကော့စတာရီကာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်နိုင်ငံ ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သောကော့စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ကော့စတာရီကာရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများ၊
ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကော့စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ကော့စတာရီရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ | San Jose ရှိ Corporate Services
ကော့စတာရီကာတွင်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းမှကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ကော်စတာရီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကော်စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းမှကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံကော်စတာရီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော်စတာရီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်စတာရီကာတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကော်စတာရီကာတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကော်စတာရီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်စတာရီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ
ကော့စတာရီကာမှစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ | San Jose ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ
ကော့စတာရီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ကော့စတာရီကာ.
သင့်ကုမ္ပဏီကိုကော့စတာရီကာတွင်သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ကော့စတာရီမှာ။
HR အတိုင်ပင်ခံ ကော့စတာရီကာတွင်သင်၏ထောက်ပံ့မှုသည်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကော့စတာရီတွင်လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ကော့စတာရီကာတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ကော့စတာရီနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းကော့စတာရီမှာ
ကော်စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ကော့စတာရီကာ.
ကော့စတာရီရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်ကော့စတာရီကာမှ။
ကော့စတာရီရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ကော့စတာရီကာရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်သင့်ကိုော့စတာရီရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - ကော့စတာရီကာအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ကော့စတာရီကာရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်ကော့စတာရီရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။ ကော့စတာရီကာရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိကော့စတာရီကာမှ
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ကော့စတာရီကာ ကော့စတာရီကာတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော့စတာရီကာ, ကော့စတာရီရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကော့စတာရီရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကော့စတာရီကာတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ကော့စတာရီကာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအလျင်အမြန်လိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေနေသည့်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးလိုသောမည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည့်နေရာတွင်မဆိုထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအနက်ရိုးသားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကော့စတာရီတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကော့စတာရီကာတွင် SRL ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုကော်စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော်စတာရီကာတွင် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန် SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန် SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကော့စတာရီတွင် SRL ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု ကော့စတာရီတွင် SA ပါဝင်မှု | ကော်စတာရီကာတွင် SRL ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီတွင် SA ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ကော့စတာရီတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီတွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း ကော့စတာရီတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ကော့စတာရီတွင် IBC ပါဝင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကော့စတာရီကာတွင်ရှိသော SA ဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် SA၊ ကော့စတာရီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်လုပ်ကွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာကမ်းလွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ကော်စတာရီကာကမ်းလွန်လုပ် SA မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကော့စတာရီကာတွင် SRL ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုကော်စတာရီကာတွင် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင် SRL ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ၊ ကမ်းလွန် SRL ကုမ္ပဏီကော်စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ SRL ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီ SRL ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ကော့စတာရီ SRL ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန် SRL ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန် SRL ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကော့စတာရီကာရှိ SA ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုကော့စတာရီတွင် SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင် SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်လုပ် SA ကုမ္ပဏီ၊ ကမ်းလွန်လုပ် SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော့စတာရီကာ၊ ကမ်းလွန်လုပ် SA ကုမ္ပဏီသည်ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ SA ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီ SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ကော့စတာရီ SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန်လုပ် SA ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန်လုပ် SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကော့စတာရီကာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သောကော့စတာရီကာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော်စတာရီကာ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကော်စတာရီကာ LLC မှတ်ပုံတင်၊ ကော့စတာရီ LLC LLC မှတ်ပုံတင်၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ကော့စတာရီကာတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကူညီသည်။ ကော့စတာရီကာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ၊ ကော့စတာရီကာအော့ဖ်ရာကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ၊
ကော်စတာရီကာရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ၊ ကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီကိုကော့စတာရီတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ကော့စတာရီအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကော်စတာရီကာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီဖွဲ့စည်းမှု၊ ကော့စတာရီကာ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကမ်းလွန်ကမ်းလွန်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ကော့စတာရီကမ်းလွန်ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကော့စတာရီတွင် SRL ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီတွင် SA ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီတွင် SRL ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီတွင် SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီတွင် LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီကာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ ကော့စတာရီတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကိုကော့စတာရီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကော်စတာရီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော့စတာရီကာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်လည်းကော့စတာရီကာ၌ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များမှာ - San Jose တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ San Jose တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ San Jose မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ San Jose မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ San Jose မှ Offshore ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းခြင်း။
ကော့စတာရီကာတွင်ဈေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း San Jose တွင်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ကော့စတာရီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကော့စတာရီကာရှိမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် San Jose ရှိမြို့ကြီးများရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များကိုထောက်ခံသည်။ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ San Jose ရှိ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ San Jose ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ကော့စတာရီကာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း San Jose တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
ကော့စတာရီကာတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကော့စတာရီကာတွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ San Jose၊ San Jose တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ San Jose ရှိ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ San Jose ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း။
ကော့စတာရီကာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ San Jose တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ , San Jose အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်, San Jose မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်, San Jose အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ San Jose အတွက် setup ကိုကုမ္ပဏီ, San Jose မှာကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်, San Jose အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်မြို့များ။
ကော့စတာရီတွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ San Jose တွင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလားကျွန်ုပ်ကိုကော့စတာရီကာ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကော့စတာရီကာတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ San Jose တွင်နေထိုင်သူများ၊ San Jose တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကော့စတာရီ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ San Jose
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကော့စတာရီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ကော်စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေကော်စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု၊ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီတွင်ကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီတွင်ကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကော့စတာရီတွင်ကုန်ကျသည်
ကော့စတာရီကာစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး San Jose ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ကော့စတာရီကာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ San Jose တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
ကော့စတာရီတွင် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ကော့စတာရီတွင် SA မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော်စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော့စတာရီတွင် SA ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော့စတာရီတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော့စတာရီတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော့စတာရီတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကော့စတာရီတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းလော
ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိကြောင်းအသုံးပြုသူများကမေးသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
ကော့စတာရီကာတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ကော့စတာရီတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ကော့စတာရီကာတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်ကိုသင်၏ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးကဲမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကော်စတာရီကာရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်ကော်စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းမှုအေးဂျင့်များနှင့်ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကကော်စတာရီကာရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ ကော့စတာရီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကော့စတာရီရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
San Jose ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးသည်။ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လိုပါကသင့်တော်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
သင့်အနေဖြင့်ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ကော့စတာရီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ကော့စတာရီကာတွင်လည်းကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ကော့စတာရီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည် San Jose တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်သည်။ ဟိုဆေး, San Jose မှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း, San Jose အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။
ကော့စတာရီကာတွင်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု San Jose တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Casa Presidencial ကော့စတာရီ
Ministerio က de Relaciones Exteriores y Culto
Nacional de Estadística y Censos Instituto
Google Earth ကော့စတာရီကာ
Google Earth San San José
Bolsa Nacional က de Valores လုပ် SA
CADEXCO - ကော့စတာရီကန်တင်ပို့သူများကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Talamanca Range-La Amistad Reserve / La Amistad အမျိုးသားဥယျာဉ်
Precolumbian Chiefdom အခြေချမှုများသည်Diquís၏ကျောက်ပြားများနှင့်အခြေချခြင်းဖြစ်သည်
Tico Times သတင်းစာ
Museo က de Arte Costarricenseပလတ်စတစ်အနုပညာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ပြသခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်အဓိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
Museo de Arte y DiseñoContemporáneo - ခေတ်ပြိုင်အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း MADC ပြတိုက်။
Museo del Oro Precolombino- ကော့စ်တာရီကာ၏ဗဟိုဘဏ်ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် San Joséရှိကိုလံဘီယာရွှေပြတိုက်။
Museo Históricoယဉ်ကျေးမှု Juan Santamaría- Alajuela ရှိသမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်။
Museo Nacional က de ကော့စတာရီ- ကော့စတာရီ၏အမျိုးသားပြတိုက်။
Nacional က de Biodiversidad.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ကော့စတာရီကို
ဘီဘီစီ - ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ၏အခြေအနေ
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ကော့စတာရီကာ
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ကော့စတာရီကာ
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - ကော့စတာရီကာ
နောက်ခံမှတ်စုများ - ကော့စတာရီကို
World Factbook - ကော့စတာရီကာ
FAO - ကော့စတာရီကာ
Banco Nacional က de ကော့စတာရီ https://www.bncr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx
Banco CréditoAgrícola de Cartago- https://si.cultura.cr/financiamiento/banco-credito-agricola-de-cartago-bancredito-centro-pymes.html
HSBC ကော့စတာရီကာ http://www.onlinebanksguide.com/hsbc-bank/costa-rica.html
Banco Cuscatlan; Citigroup မှပိုင်ဆိုင်သည် https://www.centralamericadata.com/en/search?q1=content_en_le:%22Banco+Cuscatl%C3%A1n%22
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကော့စတာရီကာရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ကော့စတာရီကာ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ကော့စတာရီကာအတွင်း (သို့) သို့သွားရာစက်မှုနည်းပညာထောက်လှမ်းရေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကော့စတာရီကာဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်၊
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကော့စတာရီကာအတွင်း (သို့) ကနေဒါမှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုမ္မဏီတွေဆီကဖြစ်စေ၊ ကော့စတာရီကာမှာဖြစ်စေ၊ ကနေဒါဒါမှမဟုတ်ဖြစ်စေကုမ္ပဏီတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုကော့စတာရီကာရှိဒါမှမဟုတ်ကော့စတာရီကာကနေပြီး၊ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ (သို့) တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကော့စတာရီကာရှိသို့မဟုတ်ကနေကစတာရီကာသို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ကော့စတာရီကာအတွင်းမှသို့မဟုတ်ကနေဒါသို့ဖြစ်စေလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကော့စတာရီကိုမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုကော့စတာရီကာရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုကော့စတာရီကာရှိသို့မဟုတ်ကော့စတာရီကာသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးသည်မဟုတ်။
●ကော့စတာရီကာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ကော့စတာရီကာရှိသို့မဟုတ်ကနေသို့ကစတာရီကာတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ကော့စတာရီကာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ကော့စတာရီကာ, ကော့စတာရီကာ ဘဏ်အကောင့်, ကော့စတာရီကာ ယုံကြည်မှု ကော့စတာရီကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ကော့စတာရီကာ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ကော့စတာရီကာသည်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-costa-rica/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
The user came to your website from: https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-costa-rica/
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-costa-rica/